Low Phopia (2) တွင် Dopamine D2000 Receptor ကိုချည်နှောင်နိုင်သည့်အလားအလာ - Porn On Your Brain
အနိမျ့ Dopamine D2 လူမှု Phobia (2000) ခုနှစ်တွင် receptor binding နိုင်သည့်အလားအလာ,
YBOP မှတ်ချက်များ - dopamine receptor (D2) ပမာဏနည်းပါးခြင်းသည်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရောဂါနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများသည်လူမှုရေးဆိုင်ရာစိုးရိမ်မှုများကိုခံစားကြရသည် အချို့ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ပြီးလူမှုရေးစိုးရိမ်မှုများတိုးပွားလာသည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်။ အများစုအတွက်စိုးရိမ်စိတ်သည်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း၏နောက်ဆက်တွဲတိုးတက်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် - အချို့သောအချိန်တိုလေးအတွက်၊ အခြားသူများသည်ကြာရှည်ရန်ဖြစ်သည်။ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းခြင်းအားဖြင့် dopamine D2 receptors ကိုလျော့နည်းစေတယ်။ မှတ်ချက်။ ။ porn က SAD ကိုဖြစ်ပွားစေသည်ဟုငါမပြော။
နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု။ 2000 Mar;157(3):457-9.
Schneier FR, Liebowitz MR, ဗြ Dargham တစ်ဦးက, Zea-ပှနျး Y ကို, လင်း SH, Laruelle အမ်တော့ပူပန် Disorders ဆေးခန်းနှင့်ဦးနှောက် Imaging ကတိုင်း, နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute ကနယူးယောက် 10032, USA ။
Objective: ဒီလေ့လာမှု dopamine: D (2) လူမှုရေး phobia ကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူနာအတွက်အဲဒီ receptor binding အလားအလာနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။
METHOD: Dopamine: D (2) အဲဒီ receptor binding အလားအလာ generalized လူမှုရေး phobia နှင့်အတူ 10 unmedicated ဘာသာရပ်များနှင့်အသက်အရွယ်နှင့်လိင်အဘို့အလိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသိသာတစ်သက်တာစိတ်ရောဂါ comorbidity နှင့် 10 ကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ binding အလားအလာတစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ် computerized tomography နှင့် D ကို (2) အဲဒီ receptor radiotracer ၏စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည် [(123) ကျွန်မ] iodobenzamide ([(123) ကျွန်မ] IBZM) ကို အသုံးပြု. ၎င်း striatum အတွက်တိုင်းတာခဲ့သည်။
ရလဒ်: : D (2) အဲဒီ receptor binding အလားအလာဆိုလိုနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက်ထက်လူမှုရေး phobia အတူဘာသာရပ်များအတွက်သိသိသာသာနိမ့်ခဲ့သည်။ လူမှု phobia အုပ်စုတစ်စုအတွင်း, အ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေးရမှတ်နှင့်အတူအလားအလာ binding တစ် nonsignificant ဆက်စပ်မှုရှိ၏။
နိဂုံးချုပ်: Generalized လူမှုရေး phobia D ကိုမှ [(123) ကျွန်မ] IBZM (2) ၏အနိမ့်စည်းနှောင်တွေနဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါ၎င်း striatum အတွက် receptors ။
ကြောက်ရွံ့သောစိတ်နှင့် / သို့မဟုတ်အများဆုံးလူမှုရေးအခြေအနေများ၏ရှောင်ရှားခြင်းအားဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာလူမှုရေး phobia ၏အထွေထွေမျိုးကွဲ, နာတာရှည်ဖြစ်ပါသည် (1), heritable ဖြစ်ပါသည် (2)နှင့်တိရိစ္ဆာန်များအတွက်လက်အောက်ခံလူမှုရေးအဆင့်အတန်းနှင့်အတူအမူအကျင့် features တွေဝေမျှစေခြင်းငှါ (3)သို့သော်လည်း, လူမှုရေး phobia ၏ဇီဝဗေဒနည်းနည်းလေ့လာခဲ့ပြီ။ အဆိုပါ dopamine စနစ် subnormal ဂီယာနှင့်အတူလူမှုရေး phobia တစ်ခုအသင်းအဖွဲ့များအတွက်အထောက်အထားကုသမှု monoamine oxidase inhibitors များအတွက်ထိရောက်မှုရှိသော်လည်းသုံးဘီးဆိုင်ကယ်မဟုတ်စိတ်မကျဆေး Antidepressants ပါဝင်သည် (4)generalized လူမှုရေး phobia အတွက်အနိမ့် dopamine Transporter သိပ်သည်းဆ (5)comorbid လူမှုရေး phobia နှင့်အတူထိတ်လန့်ရောဂါဝေဒနာရှင်တို့တွင်အ homovanillic အက်ဆစ်၏, အနိမ့် CSF အဆင့်ဆင့် (6)ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအကြားလူမှုရေး phobia ၏မြင့်မားမှုနှုန်း (7)နှင့် Tourette ရဲ့ syndrome ရောဂါနှင့်အတူလူနာ haloperidol ကုသမှုစဉ်အတွင်းလူမှုရေး phobia လက္ခဏာတွေတိုးလာ (8).
ဒီလေ့လာမှုမှာကျနော်တို့: D dopamine နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ2 generalized လူမှုရေး phobia ကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူနာအတွက်အဲဒီ receptor binding အလားအလာဖြစ်ပါတယ်။
လူမှုရေး phobia နှင့်အတူဆယ်ပါးဘာသာရပ်များကြော်ငြာနှင့်လက်တွေ့ရည်ညွှန်းခြင်းဖြင့်စုဆောင်းကြသည် ဟူ. ၎င်း, ၎င်းတို့၏ယုတ်အသက်အရွယ် 32.5 နှစ်ပေါင်း (SD က = 10.4) ဖြစ်ခဲ့သည်နှင့်အုပ်စုငါးခုယောက်ျားငါးအမျိုးသမီးများကိုဖွဲ့စည်း။ ပြီးပြည့်စုံသောဆေးဘက်ဆိုင်ရာအကဲဖြတ်ဆုံးဖြတ်အဖြစ်အားလုံးဘာသာရပ်များအဘယ်သူမျှမကလက်ရှိသို့မဟုတ်တစ်သက်တာစိတ္တ, အော်ဂဲနစ်စိတ်ရောဂါအဓိကစိတ်ကျရောဂါ, စိတ်ကြွရောဂါ, ထိတ်လန့်ရောဂါ, obsessive-compulsive ရောဂါ, posttraumatic စိတ်ဖိစီးမှုရောဂါ, ရောဂါအစာစားခြင်း, အာရုံစူးစိုက်မှုကိုလိုငွေပြမှု hyperactivity ရောဂါ, ဥစ်စာနှငျ့, ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာခဲ့ကြသည် အလွဲသုံးစားမှုသို့မဟုတ်မှီခို, schizotypal သို့မဟုတ်နယ်စပ်ဒေသကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောဂါ, ဒါမှမဟုတ် schizophrenia များ၏မိသားစုသမိုင်း။ အသက်အရွယ်နှင့်လိင်အားဖြင့်နှင့်မျှမကလက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်စိတ်ရောဂါနှင့်အတူလိုက်ဖက်ဆယ်ပါးကျန်းမာနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များ, ကြော်ငြာအားဖြင့်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ Diagnoses DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorders များအတွက်ပုံစံချထားသောလက်တွေ့အင်တာဗျူးကို အသုံးပြု. အတည်ပြုခဲ့သည်ခဲ့ကြသည် (9).
အဆိုပါ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး (10) လူမှုရေး phobia ၏ပြင်းထန်မှုကိုတိုင်းတာရန်အသုံးပြုခဲ့သည်။ : D2 အဲဒီ receptor binding အလားအလာ [သည့် radiotracer အသုံးပြု. တိုင်းတာခဲ့သည်123ကျွန်မ] iodobenzamide ([123ယခင်ကဖော်ပြခဲ့သကဲ့သို့ bolus ပေါင်းအဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည်နည်းလမ်းအားဖွငျ့, tomography computerized တစ်ခုတည်းဖိုတွန်ထုတ်လွှတ်အတူငါ] IBZM) (11)။ စဉ်ဆက်မပြတ်အရွယ်အစားနဲ့ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုစံဒေသ-of အကျိုးစီးပွားပရိုဖိုင်းကိုလေ့လာမှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့အသုံးပြုခဲ့ပါတယ်။ ညာဘက်နှင့် striatal ဒေသများနှင့် occipital ဒေသများ left ချုပ်ဖော်ပြပုံရိပ်တွေအပေါ် positioned ခဲ့ကြသည်။ တိကျတဲ့စည်းနှောင် equilibrium မှာ striatal လှုပ်ရှားမှုနဲ့ occipital လှုပ်ရှားမှုအကြားကွာခြားချက်အဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည်။ [123အခမဲ့အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆ (ခ၏ထုတ်ကုန်ဖို့သက်ဆိုင်ရာငါ] IBZM binding အလားအလာ (ml / g အတွက်),max ကို, nm သို့မဟုတ်ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရဲ့ဂရမ်နှုန်း picomoles အတွက်) နှင့်ဆှဖှေဲ့ (1 / K သည်D, 1 / nm သို့မဟုတ်၏ picomole နှုန်းပလာစမာ၏ milliliters အတွက် [123ကျွန်မ] IBZM), ပလာစမာ၏ milliliter နှုန်း microcuries အတွက်အခမဲ့ unmetabolized ပလာစမာ tracer အာရုံစူးစိုက်မှု ()-ပြည်နယ်မြံဖို့ဦးနှောက်တစ်သျှူးတွေရဲ့ဂရမ်နှုန်း microcuries အတွက် binding striatal သတ်သတ်မှတ်မှတ် () ၏အချိုးအစားအဖြစ်တွက်ချက်ခဲ့သည် (12).
အဆိုပါအုပ်စုသည်နှိုင်းယှဉ် 0.05 တစ်ခု alpha နှင့်အတူ Two-Tails unpaired t ကိုစမ်းသပ်မှုများအသုံးပြုခဲ့သည်။ binding အလားအလာရာထူး-အသွင်ပြောင်းဒေတာ (Spearman ရာထူးဆက်စပ်မှု) ၏နည်းလမ်းဖြင့်လက်တွေ့ပြင်းထန်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်။
အဘယ်သူမျှမအရေးပါသောအုပ်စုသည်အသက်အရွယ်အတွင်းရှိကွဲပြားမှု, လိင်, လူမျိုး, ပညာရေး, အိမ်ထောင်ရေးအခြေအနေ, သို့မဟုတ်သန်ရှိခဲ့သည်။
[အတွက်သိသာထင်ရှားသောခြားနားချက်ရှိခဲ့သည်123ကျွန်မ] IBZM အုပ်စုများအကြားအလားအလာ binding (t = 2.6, DF = 18, p = 0.02), General လူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက်အနိမ့်စည်းနှောင်အလားအလာနှင့်အတူ (ယုတ် = 93.6 ml / g, SD က = 29.8) ကိုနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များအတွက်ထက် ( ယုတ် = 133.5 ml / g, SD က = 38.2) (F1) ။ လူမှု phobia အုပ်စုတစ်စုအတွင်း, အ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေးပေါ်တွင်စုစုပေါင်းရမှတ် (r ကိုအတူ binding အလားအလာတစ် nonsignificant နှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောဆက်စပ်မှုရှိခဲ့s= -0.59, N ကို = 10, p = 0.07) ။
ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက် generalized လူမှုရေး phobia အနိမ့် D နဲ့ဆက်နွယ်စေခြင်းငှါအကြံပြု2 အဆိုပါ striatum အတွက်အလားအလာ binding အဲဒီ receptor ။ အနိမ့်: D2 အဲဒီ receptor binding အလားအလာလူမှုရေး phobia အတွက်အနိမ့် dopamine စနစ်ကလှုပ်ရှားမှုများ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါလိမ့်မယ်.
ဒီလေ့လာမှုကဘာသာရပ်၏အသေးအရေအတွက်အားဖြင့်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဒါ့အပြင်တစ်ဦးတည်းသာ High-တိကျတဲ့-လှုပ်ရှားမှုစမ်းသပ်မှု D ကိုတစ်ဦးချင်းစီဘာသာရပ်နှင့်အတူဖျော်ဖြေခဲ့လို့2 အဲဒီ receptor သိပ်သည်းဆနှင့်ဆှဖှေဲ့တိုင်းတာနိုင်ခြင်းမရှိပါ။
အဆိုပါတွေ့ရှိချက်လူ့လူမှုရေး phobia နှင့်အတူအမူအကျင့် features တွေဝေမျှဖို့အကြံပြုထားပြီးဖြစ်သောလက်အောက်ခံလူမှုရေးအဆင့်အတန်းတိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ, ကနေသူများ Parallel မှပေါ်လာ (3)။ အမျိုးသမီး cynomolgus မျောက်များ၏ဥပမာ, မကြာသေးမီ positron ထုတ်လွှတ် tomography လေ့လာမှု (13) အောက်ပိုင်း striatal D ကိုပြသ2 generalized လူမှုရေး phobia ၌အကြှနျုပျတို့၏တွေ့ရှိချက်ဆင်တူလက်အောက်ငယ်သားအတွက် binding ။ လက်အောက်ခံလူမှုရေးအဆင့်အတန်းတိရိစ္ဆာန်များလူ့လူမှုရေး phobia အခြေခံဦးနှောက် function ကိုနားလည်သဘောပေါက်များအတွက်အသုံးဝင်သောမော်ဒယ်ဖြစ်နိုင်သည်။
အနိမ့်: D2 binding အဲဒီ receptor မဟုတ်ဘဲစိတ်ဖိစီးမှုသို့မဟုတ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရောဂါတစ်ခု nonspecific Correlate ကိုယ်စားပြုထက်, လူမှုရေး phobia အနည်းဆုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းတိကျတဲ့ပုံရသည်။ : D2 binding schizophrenia အတွက်အနိမ့်စေခြင်းငှါရှာတွေ့ရသေး (14) သို့မဟုတ်အဓိကစိတ်ကျရောဂါ (15)။ ဒါဟာပစ္စည်းဥစ္စာအလွဲသုံးစားမှုမမှန်အတွက်အနိမ့်စေခြင်းငှါအစီရင်ခံထားသည် (16)မကြာခဏလူမှုရေး phobia နှင့်အတူ comorbid စေခြင်းငှါအရာ (17).
ဤရွေ့ကားဒေတာကြောင့်အနိမ့်: D အကြံပြု2 အလားအလာ binding အဲဒီ receptor လူမှုရေး phobia နှင့်ဆက်စပ်မည်အကြောင်းတည်း။ အခြားအစင်တာများအနေဖြင့်ရလဒ်များသည်နှင့်အတူပေါင်းလိုက်သောအခါဤဒေတာကြောင့်: D ကြီးထွားလာသက်သေအထောက်အထားမှ add2 အဲဒီ receptor function ကိုလူသားများတွင်လူမှုရေးအပြုအမူ modulates ။
ဖေဖော်ဝါရီလ 23, 1999 လက်ခံရရှိ; တည်းဖြတ်မူများကိုဇူလိုင်လ 13 နှင့်သြဂုတ်လ 27, 1999 လက်ခံရရှိ; စက်တင်ဘာ 2, 1999 လက်ခံခဲ့သည်။ စိုးရိမ်ခြင်း Disorders ဆေးခန်းနှင့်ဦးနှောက် Imaging ကတိုင်း, နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute ကထံက၎င်း, နှင့်စိတ်ရောဂါကုသမှု, သမားတော်များနှင့်ခွဲစိတ်ကုဆရာဝန်များ၏ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်ကောလိပ်နယူးယောက်၏ဦးစီးဌာန။ အဘယ်သူမျှမပြန်လည်ပရင့်ထုတ်ရန်ရရှိနိုင်ပါသည်။ ; ဒေါက်တာ Schneier, စိုးရိမ်ပူပန် Disorders ဆေးခန်း, ယူနစ် 69, နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ, 1051 Riverside မှဒေါက်တာ, နယူးယောက်, NY 10032 လိပ်စာစာပေးစာယူ [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်] (e-mail,) ။ ဒေါက်တာ Laruelle ဖို့ဖန်းဖောင်ဒေးရှင်းကနေ Solvay ဆေးဝါးနှင့် NIMH လွတ်လပ်သောသိပ္ပံပညာရှင်ဆုကိုခြင်းဖြင့် MH-01603 ထံမှထောက်ပံ့ငွေများကထောက်ခံခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါစာရေးဆရာနည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကူအညီအတွက်ကေသီ Rivera, Tami Edwards က, Janine Rodenhiser, Ph.D ဘွဲ့ကို, Suehee Chung, မာလီ Pratap, Ted Pozniakoff, ရစ်ချတ် Weiss ဒန် Schneider နှင့် Analea Arevalo ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
Dopamine: D2 Generalized လူမှု Phobia နှင့်ကျန်းမာရေးနှိုင်းယှဉ်ဘာသာရပ်များနှင့်အတူလူနာအတွက် receptor binding နိုင်သည့်အလားအလာ,
Chartier MJ, Hazen AL, Stein ကို MB: လူမှုရေး phobia ၏တစ်သက်တာပုံစံများ: တစ် nonclinical လူဦးရေအတွက်လူမှုရေး phobia ၏သင်တန်းတစ်ခုနောက်ကြောင်းပြန်လေ့လာမှု။ ပူပန် 1998 စိတ်ကျရောဂါ; 7: 113-121
Kendler KS, Neal MC, Kessler RC, Heath AC အ, Eaves LJ: အမျိုးသမီး phobias ၏မျိုးဗီဇရောဂါ: အ agoraphobia ၏အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှု, လူမှုရေး phobia, အခွအေနေ phobia နှင့်ရိုးရှင်းသော phobia ။ Arch ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိတ်ရောဂါကုသမှု 1992; 49: 273-281
Ohman ဖြေသားရဲ၏ရင်ဆိုင်ရနိုင်နှင့်မျက်နှာကိုကွောကျရှံ့: တိရိစ္ဆာန်နဲ့စိတ်လှုပ်ရှားမှု၏ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်ရှေ့ပြေးပုံစံအဖြစ်လူမှုရေးစိုးရိမ်မှုတွေ။ Psychophysiol 1986; 23: 123-145
Liebowitz MR, Campeas R ကို, Holland, E: လူမှုရေး phobia နှင့် atypical စိတ်ကျရောဂါအတွက်ဖြစ်နိုင်ပါ့မလား dopamine dysregulation ။ စိတ်ရောဂါကုသမှု Res 1987; 22: 89-90
Tiihonen J ကို, Kuikka J ကို, Bergstrï¿½, Lepola ဦး, Koponen H ကို, Leinonen အီး: လူမှုရေး phobia နှင့်အတူလူနာအတွက် Dopamine reuptake site ကိုထု။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1997; 154: 239-242
Johnson က MR, Lydiard RB, Zealberg JJ, Fossey MD, Ballenger JC: Plasma နှင့် CSF အဆင့်ဆင့် comorbid လူမှုရေး phobia နှင့်အတူထိတ်လန့်လူနာတွေအတွက်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 1994; 36: 426-427
Stein ကို MB, Heuser IJ, Juncos JL, Uhde TW: ပါကင်ဆန်ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက်ပူပန်မမှန်။ နံနက် J ကိုစိတ်ရောဂါကုသမှု 1990; 147: 217-220
Mikkelsen EJ, Detlor J ကို, Cohen ကို DJ သမား: Tourette ရဲ့ရောဂါနှင့်အတူလူနာအတွက် haloperidol ခြင်းဖြင့်အစပျိုးကျောင်းရှောင်ရှားခြင်းနှင့်လူမှုရေး phobia ။ နံနက် J ကို Psychiatry1981; 138: 1572- 1576
ပထမဦးဆုံးအကို MB, Spitzer RL, မျောက်လွှဲကျော်က M, Williams က JBW: DSM-IV ဝင်ရိုးတန်းငါ Disorders, လူနာ Edition ကို (SCID-P), ဗားရှင်း2များအတွက်စနစ်ကျသောကုသမှုဆိုင်ရာမေးမြန်းချက်။ နယူးယောက်, နယူးယောက်ပြည်နယ်စိတ်ရောဂါ Institute မှ, biometric သုတေသန 1994
Heimberg RG, Horner KJ, Juster HR, Safren လုပ် SA, Brown က EJ, Schneier FR, Liebowitz MR: အ Liebowitz လူမှုတော့ပူပန်စကေး၏ Psychometric ဂုဏ်သတ္တိများ။ Psychol Med 1999; 29: 199-212
Laruelle M က, အာဘိ-Dargham တစ်ဦးက, ဗန် Dyck CH, Rosenblatt W က, Zea-ပှနျး Y ကို, Zoghbi အက်စ်အက်စ်, Baldwin RM, Charney DS, Hoffer PB, Kung-HF, Innis RB: စိတ်ကြွဆေးစိန်ခေါ်မှုပြီးနောက် dopamine လွှတ်ပေးရေး SPECT ပုံရိပ်။ J ကို Nucl Med1995; 36: 1182- 1190
Laruelle M က, အာဘိ-Dargham တစ်ဦးက Al-Tikriti က MS, Baldwin RM, Zea-ပှနျး Y ကို, Zoghbi အက်စ်အက်စ်, Charney DS, Hoffer PB, Innis RB: များ၏ SPECT အရေအတွက် [123ကျွန်မ] nonhuman မျောက်ဝံများအတွက် benzodiazepine receptors မှ II ကို binding iomazenil: equilibrium စဉ်ဆက်မပြတ်ပြုတ်ရည်စမ်းသပ်မှု၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်စသည်တို့ parameters တွေကိုနှင့်အတူဆက်စပ်မှု။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 1994; 14: 453-465
Grant က ka, Shively, CA, Nader, MA, Ehrenkaufer RL, လိုင်း SW, Morton TE, Gage, HD, Mach RH အ: striatal DA D2 အဲဒီ receptor အပေါ်လူမှုရေးအဆင့်အတန်း Effect positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူအကဲဖြတ် cynomolgus မျောက်တွေကိုဝိသေသလက္ခဏာများကိုစညျး။ synapses 1998; 29: 80-83
Laruelle M က: schizophrenia အတွက် Imaging က dopamine ဂီယာ: တစ်ပြန်လည်သုံးသပ်နှင့် Meta-analysis သည်။ QJ Nucl Med 1998; 42: 211-221
Shah က PJ, Ogilvie အေဒီ, Goodwin က GM က, Ebmeier KP: စိတ်ကျရောဂါအတွက် binding dopamine D2 ၏လက်တွေ့နှင့် psychometric Correlate ။ Psychol Med1997; 27: 1247- 1256
Hietala J ကိုအနောက်ကို C, Syvalahti အီး, Nagren K ကို Lehikoinen P ကို, Sonninen P ကို, Ruotsalainen ဦး: Striatal: D2 dopamine အဲဒီ receptor အရက်မှီခိုနှင့်အတူလူနာအတွက် Vivo အတွက်ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစညျး။ Psychopharmacology (Berl) 1994; 116: 285-290
Schneier FR, မာတင် Ly, Liebowitz MR, Gorman JM, Klein DF, Fyer အဘိဓါန် AJ: အရက်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်လူမှုရေး phobia ။ J ကိုပူပန် disorders 1989; 3: 15-23
မူပိုင်ခွင့်© 2012 American Psychiatric Association